Teny tsara indrindra avy amin'i Denzel Washington - Victor Mochere
Fotoana famakiana: 14 mn novakiana
Denzel Hayes Washington Jr. dia mpilalao, talen-koronantsary, mpamoaka horonantsary. Fantatra tamin'ny fampisehoany teo amin'ny efijery sy ny sehatra, nofaritana ho mpilalao sarimihetsika nanavao ny “fototry ny kintan'ny sarimihetsika mahazatra” izy. Nandritra ny asany dia nahazo mari-pankasitrahana maro i Washington, anisan'izany ny Tony Award, ny Academy Awards roa, ary ny Golden Globe Awards telo. Tamin'ny taona 2016, nahazo ny loka Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award izy, ary tamin'ny taona 2020, ny New York Times dia nanome azy anarana ho mpilalao sarimihetsika lehibe indrindra tamin'ny taonjato faha-21.
Nanomboka ny asany tao amin'ny teatra i Washington, nanao seho an-tsehatra ivelan'ny Broadway, anisan'izany ny Coriolanus an'i William Shakespeare tamin'ny 1979. Nalaza voalohany tamin'ny tantara ara-pitsaboana St. Elsewhere (1982-1988) izy. Ny anjara asan'ny sarimihetsika tany am-boalohany tany Washington dia nahitana ny Tantaran'ny miaramila iray nataon'i Norman Jewison (1984) ary ny Cry Freedom an'i Richard Attenborough (1987). Ho an'ny andraikiny amin'ny maha-Silas Trip tsy miankina amin'ny tantara an-tsehatra momba ny ady an-trano Glory (1989), dia nahazo ny loka Akademia voalohany ho an'ny mpilalao mpanohana tsara indrindra izy.
Nandritra ny taona 1990 dia nanangana ny tenany ho olo-malaza amin'ny sarimihetsika isan-karazany toy ny sarimihetsika tantaram-piainan'i Spike Lee Malcolm X (1992), ny fampifanarahana an'i Shakespeare nataon'i Kenneth Branagh, Much Ado About Nothing (1993), ilay mpilalao sarimihetsika ara-dalàna an'i Alan J. Pakula The Pelican Brief (1993). ), ny tantara an'i Jonathan Demme Philadelphia (1993), ary ny tantara ara-dalàna nataon'i Norman Jewison The Hurricane (1999). Nahazo ny loka Akademia ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra i Washington noho ny andraikiny amin'ny maha-mpitsikilo mpanao kolikoly Alonzo Harris tao amin'ny Andro Fampiofanana momba ny heloka bevava (2001).
Nanohy nitendry andraikitra isan-karazany i Washington, toy ny mpanazatra baolina kitra Herman Boone ao amin'ny Remember the Titans (2000), poeta sady mpanabe Melvin B. Tolson ao amin'ny The Great Debaters (2007), kingpin zava-mahadomelina Frank Lucas ao amin'ny American Gangster (2007) ary fiaramanidina iray. mpanamory fiaramanidina miaraka amin'ny fiankinan-doha amin'ny Flight (2012). Nahazo ny Tony Award ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra amin'ny lalao izy noho ny zava-bitany tamin'ny fifohazana Broadway tamin'ny August Wilson play Fences tamin'ny 2010.
Washington taty aoriana dia nitarika, namokatra ary nilalao tamin'ny fampifanarahana sarimihetsika tamin'ny 2016, izay voatendry ho an'ny Academy Awards efatra, anisan'izany ny sary tsara indrindra sy ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra ho an'i Washington. Izy koa dia namokatra ny fampifanarahana ny sarimihetsika an'i Wilson's Ma Rainey's Black Bottom (2020). Izy koa dia niseho tao amin'ny fifohazana Broadway an'i Lorraine Hansberry's A Raisin in the Sun tamin'ny 2014, ary ny The Iceman Cometh an'i Eugene O'Neill tamin'ny 2018. Washington dia iray amin'ireo mpilalao dimy tokana voatendry ho amin'ny Loka Akademia noho ny filalaovana tao anatin'ny dimypolo taona. .
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Denzel Washington dia voatanisa etsy ambany.
“Nisy lehilahy iray nilaza tamiko fa mivoaka ny varavaranao ianao ny maraina, ary efa sahirana ianao. Ny hany fanontaniana dia hoe ianao ve no eo ambonin'io olana io sa tsia?" - Denzel Washington
"Ny vehivavy hendry dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny firesahana ny fiainana amin'ny lehilahy. Raha tia azy ianareo, dia minoa azy, mamporisika azy, ary aoka ho fiadanana ho azy. - Denzel Washington
"Fomba fivelomana fotsiny ny fihetsiny, ny fianakaviana no fiainana." - Denzel Washington
“Tsy ny fiainako sy ny zanako ary ny fianakaviako no fiainana. Hifoha isa-maraina aho, raha sitrapon’Andriamanitra, ho amin’izany.” - Denzel Washington
“Ary ny mahafinaritra amin'ny sarimihetsika dia rehefa vita izy ireo, dia an'ny olona izy ireo. Rehefa vitanao dia izay no hitan'izy ireo. Eo no misy ny lohako.” - Denzel Washington
"Ny ampahany tsara rehetra toa an'i Shakespeare dia tokony ho misokatra amin'ny fandikana indray." - Denzel Washington
“Amin'ny farany, tsy ny zavatra anananao na ny zava-bitanao akory no resahina. Momba ny zavatra nataonao tamin'ireo zava-bita ireo. Momba ny olona nasandratrao, izay nohatsarainao. Momba izay naverinao izany.” - Denzel Washington
"Tandremo izay angatahinareo fa rehefa mivavaka ho an'ny orana ianareo dia tsy maintsy miatrika ny fotaka ihany koa." - Denzel Washington
"Minoa fa lehibe noho ny tenanao ny zavatra ataonao, dia hahita fiadanana tsy azo soloina ianao." - Denzel Washington
“Sarotra azo ny ampahany tsara mainty na fotsy. Ny mpilalao sarimihetsika tsara manana fahafahana tsara dia manana tifitra; raha tsy misy ny fahafahana dia tsy maninona ny hatsaranao.” - Denzel Washington
"Ataovy izay tokony hataonao mba hahafahanao manao izay tianao hatao." - Denzel Washington
“Aza mitsiriritra fivelomana, miezaha hanao fiovana.” - Denzel Washington
"Aza matahotra ny tsy hahomby, ny manonofy lehibe." - Denzel Washington
“Aza manao fihetseham-po amiko rehetra, mahatonga ahy hieritreritra fa ho faty aho.” - Denzel Washington
"Aza mitsiriritra fotsiny ny fivelomana fa miezaha hanao fiovana." - Denzel Washington
“Aza lazaina amiko izay voalaza momba ahy. Lazao ahy hoe nahoana izy ireo no nahafaly azy ireo nilaza izany taminao?” - Denzel Washington
“Tena tsara ny nofy. Raha ny marina, ilaina ny nofinofy eo amin'ny fiainana na tsy misy olona handeha na aiza na aiza! Saingy ny nofinofy tsy misy tanjona, ary tsy misy hetsika, dia tsy manana fahafahana ho tanteraka. " - Denzel Washington
"Ny nofy tsy misy tanjona dia mijanona ho nofinofy." - Denzel Washington
"Ny nofy tsy misy tanjona dia nofinofy fotsiny ary miteraka fahadisoam-panantenana amin'ny farany." - Denzel Washington
“Isan'andro, amin-kitsimpo sy tsy misy phoniness, miezaha hahatakatra sy hankasitraka ireo olona miara-miasa aminao. Ataovy tsara ny asanao, ianaro tsara ny asanao, fa tadidio foana fa ny olona miara-miasa aminao no fanananao sarobidy indrindra. Raiso izy ireo. Omeo voninahitra izy ireo. Hajao izy ireo.” - Denzel Washington
"Ny fanandramana rehetra tsy nahomby dia dingana iray manakaiky ny fahombiazana." - Denzel Washington
“Samy manana ny asany ny tsirairay. Misy olona any Irak amin'ny lafiny roa amin'ity ady ity izay manao izay ataony noho ny antony ara-pivavahana, ary mahatsapa fa miaraka amin'Andriamanitra izy ireo. Misy olona mahay mamono olona. Angamba izany no fanomezana ho azy ireo.” - Denzel Washington
"Ny finoana dia ny fahatokiana, ny fahatokiana, ny fahamarinana mampatanjaka, ny fahalalana." - Denzel Washington
“Ny finoana dia hitondra anao amin'ny teboka iray. Ny vintana dia hitondra anao amin'ny teboka iray. Saingy raha te hanatratra ny karazana fahombiazana nofinofinao ianao dia mila MIASA. Tsy misy hitsin-dalana, tsy afaka mamitaka ny fiainana ianao, mandehana miasa fotsiny ary aza mijanona mandra-pahatonganao amin'ny tanjonao ambony indrindra." - Denzel Washington
“Mianjerà!” - Denzel Washington
“Mifantoha amin'izay ataonao, fa tsy amin'ny mpitsikera. Tsy nanao tantara mihitsy ny mpitsikera, ary tsy nanatsara ny fiainan’ny olona mihitsy ny mpitsikera. Mifantoha amin'ny fanomezana lanja amin'ny fomba manokana manokana anananao.” - Denzel Washington
“Ho ahy, fahombiazana amin'ny fiadanana anaty. Andro tsara ho ahy izany.” - Denzel Washington
“Omeo ny hevitry ny hafa ny maha-zava-dehibe azy. Makà torohevitra raha manorina izany, ary mianara avy amin’izany. Fa aza manorina ny fiainanao mifototra amin’ny hevitry ny hafa.” - Denzel Washington
“Omeo hevitra ny hafa ny maha-zava-dehibe azy ireo. Makà torohevitra raha manorina izany, ary mianara avy amin’izany. Aza manorina ny fiainanao mifototra amin'ny hevitry ny hafa. Matokia ny tenanao ary matokia ny safidinao. ” - Denzel Washington
"Ny tanjona amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana dia tsy ho tratra raha tsy misy ny fifehezana sy ny tsy fitoviana." - Denzel Washington
"Tsy maintsy ho iza ianao eto amin'ity tontolo ity, na inona na inona." - Denzel Washington
“Tsy nijery sarimihetsika aho rehefa lehibe.” - Denzel Washington
“Tsy miaraka amin'ny olo-malaza mihitsy aho. Ny namako akaiky indrindra dia namana taloha. Ary ny tena namako akaiky, tsy misy mpilalao sarimihetsika. - Denzel Washington
“Tsy miraharaha ny tenako amin'ny loka aho. Efa ampy ny fotoana nandehanako tany amin’ilay fety mba hahafantarana fa tsy misy dikany izany.” - Denzel Washington
“Tsy terena aho, satria manao izay tiako hatao. Tsy mahatsapa fanerena mihitsy aho. Tsy mbola nanao sarimihetsika mihitsy aho satria nihevitra aho fa izany no tian'ny olona hataoko. Somary kokoa aho, noho ny tsy fahampian'ny teny tsara kokoa, tia tena noho izany. Saingy araka ny lazaiko ao amin'ny sarimihetsika dia manao izay tokony hatao ianao mba hahafahanao manao izay tianao hatao. " - Denzel Washington
"Hitako fa tsy misy mahasoa eo amin'ny fiainana raha tsy mandray risika ianao." - Denzel Washington
“Nahazo fahombiazana be aho hatramin’ny voalohany. Tsy mbola nosedraina nandritra ny fotoana maharitra aho. Nahazo asa matihanina voalohany aho fony aho zokiolona tao amin'ny oniversite. Nanao sonia niaraka tamin’ny masoivoho William Morris aho talohan’ny nahazoako diplaoma.” - Denzel Washington
“Tsy niasa nandritra ny 20 taona aho. Izaho dia maningana amin'ny fitsipika." - Denzel Washington
"Miezaka ny ho marin-toetra sy marina amin'ny toetra ary milalao ny anjara asany aho." - Denzel Washington
“Tiako ny miresaka. Tiako ny mihetsika.” - Denzel Washington
“Tiako ny fikarohana sy ny fianarana. Asa lehibe ny fahafahana miditra amin'ny karazan'asa rehetra sy amin'ny toeran'ny hafa. " - Denzel Washington
“Nanao fanoloran-tena aho hanapaka tanteraka ny fisotroana sy izay mety hanakana ahy tsy hampitambatra ny saiko sy ny vatako. Ary nisokatra tamiko ny vavahadin-dranon’ny hatsaram-panahy – ara-panahy sy ara-bola.” - Denzel Washington
“Tsy mbola nanana ny tolona mahazatra aho. Nanana finoana aho.” - Denzel Washington
"Nilalao an'i Othello aho, saingy tsy nipetraka nieritreritra ny fomba nanaovan'i Laurence Olivier izany rehefa nilalao izany. Tsy hahasoa ahy izany.” - Denzel Washington
"Milaza aho fa ny vintana dia rehefa tonga ny fotoana iray ary vonona amin'izany ianao." - Denzel Washington
“Mbola manana ny bokim-bokiko tsy an’asa aho ary tadidiko fony aho niasa tao amin’ny sampan-draharaha misahana ny fanadiovana sy ny paositra.” - Denzel Washington
"Heveriko fa mpanoro hevitra ny modely iray - olona hitanao isan'andro, ary mianatra avy amin'izy ireo ianao." - Denzel Washington
"Heveriko fa ny faran'ny tsato-kazo totem dia vehivavy Afrikana-Amerikana na vehivavy miloko. Heveriko fa mahazo fotoana kely indrindra any Hollywood izy ireo. " - Denzel Washington
“Tsy navela handeha hijery sarimihetsika aho fony aho mbola kely; minisitra ny raiko. 101 Dalmatiana sy Mpanjakan’ny Mpanjaka, izany no halehiben’izany.” - Denzel Washington
“Miasa mafy ho an’ny mpihaino aho. Fialam-boly izany. Tsy mila fanamarinana aho.” - Denzel Washington
“Niasa tao amin’ny orinasa iray aho. Mpitondra fako aho. Niasa tao amin’ny paositra aho. Tsy ela akory izay. Tiako ny mieritreritra fa lehilahy mahazatra fotsiny aho. - Denzel Washington
“Hatahotra kokoa aho raha tsy mampiasa izay fahaiza-manao nomena ahy. Hatahotra kokoa aho noho ny fahatarana sy ny hakamoana.” - Denzel Washington
“Tsy mpankafy sarimihetsika aho. Tsy mijery sarimihetsika betsaka aho.” - Denzel Washington
“Tsy matahotra ny hanakorontana ny olona aho. Saingy tsy dia sosotra loatra aho satria azoko ny zavatra atrehiko.” - Denzel Washington
“Tsy ao anatin'ny tadio aho; Tsy mahalala mpilalao sarimihetsika mihitsy aho, fa ireo miara-miasa amiko ihany.” - Denzel Washington
“Tsy liana amin'ny maha olo-malaza aho; Mahaliana ahy ny ho mpilalao sarimihetsika tsara kokoa sy ho tale tsara kokoa.” - Denzel Washington
“Tena mirehareha aho fa mainty, saingy tsy mainty fotsiny aho. Izany no fiaviako ara-kolotsaina ara-tantara, ny firafitry ny fototarazoko, saingy tsy ny maha-izaho ahy no fototry ny famaliako ny fanontaniana rehetra.” - Denzel Washington
“Nahatsiaro ho voaro foana aho. Izany no fahamarinana marin’Andriamanitra.” - Denzel Washington
“Sambatra aho. Tsy mifidy script aho. Scripts no mifidy ahy.” - Denzel Washington
"Hitako fa tsy misy mahasoa eo amin'ny fiainana raha tsy manao risika ianao." - Denzel Washington
"Niara-niasa tamin'ny ankizy aho nandritra ny androm-piainako." - Denzel Washington
“Raha mpanao kaopy aho dia liana amin'ny fanaovana kaopy tsara indrindra azoko atao. Ny ezaka ataoko dia miditra amin'io kaopy io, fa tsy ny hevitry ny olona momba izany. " - Denzel Washington
"Raha tsy mahomby ianao dia tsy miezaka akory." - Denzel Washington
"Raha tsy matoky ny mpanamory ianao dia aza mandeha." - Denzel Washington
"Raha manana fahavalo ianao dia mianara ary fantaro ny fahavalonao, aza tezitra aminy fotsiny." - Denzel Washington
"Raha te ho mpiady ianao dia tsy maintsy miofana." - Denzel Washington
"Amin'ny asa rehetra dia mety ho sarotra izany." - Denzel Washington
"Any Los Angeles, kintana ny rehetra." - Denzel Washington
"Mba hanovana ny fiainanao dia tsy maintsy manova ny eritreritrao ianao." - Denzel Washington
"Tsy izay fantatrao fa izay azonao porofoina." - Denzel Washington
“Tsotra izany: Mahazo anjara ianao. Mitana anjara toerana ianao. Milalao tsara ianao. Manao ny asanao ianao dia mody.” - Denzel Washington
“Tsotra izany: mahazo anjara ianao. Mitana anjara toerana ianao. Milalao tsara ianao. Manao ny asanao ianao dia mody. Ary ny mahafinaritra amin'ny sarimihetsika dia rehefa vita izy ireo dia an'ny olona izy ireo. Rehefa vitanao dia izay no hitan'izy ireo. Eo no misy ny lohako.” - Denzel Washington
“Tsy hoe satria manao zavatra betsaka kokoa ianao dia tsy midika hoe mahavita zavatra betsaka ianao. Aza afangaro ny hetsika sy ny fandrosoana.” - Denzel Washington
"Mianara mihomehy amin'ny tsy fahombiazanao, mitsiky amin'ny fandresenao ary aza matahotra ny mihomehy ny tenanao." - Denzel Washington
“Ny fiainana dia vilany mampitsonika ny fahalalana sy ny traikefa, na ny anao sy ny an'ny olona rehetra manodidina anao. Aza matahotra ny hianatra avy amin'ny hadisoan'ny hafa, ary makà vaovao na hevitra mahasoa izay manampy anao hihatsara kokoa amin'ny zavatra ataonao. Eo am-pelatananao ny fahendrena, ampiasao izany. - Denzel Washington
"Ny vintana dia ny fahafahana mihaona amin'ny fanomanana." - Denzel Washington
"Ny olona no manome anao ny loka fa Andriamanitra no manome anao ny valisoa." - Denzel Washington
"Meryl sy Katharine Hepburn angamba no mpilalao sarimihetsika roa lehibe indrindra tamin'ity taonjato farany ity." - Denzel Washington
“Tsy mahavidy fahasambarana ny vola. Misy kosa milaza fa vola latsaka kely izany.” - Denzel Washington
“Ny finoako dia manampy ahy hahatakatra fa ny toe-javatra dia tsy mibaiko ny fahasambarako, ny fiadanako anaty.” - Denzel Washington
“Tsy nilavo lefona mihitsy ny reniko. Nikorontan-tsaina be aho tany am-pianarana ka nalefan’izy ireo nody aho, fa nalefan’ny reniko avy hatrany aho.” - Denzel Washington
“Nilaza tamiko ny reniko fa ny lehilahy no manome ny loka, Andriamanitra no manome ny valisoa. Tsy mila takelaka hafa aho.” - Denzel Washington
"Ny anjara andraikitro 14 taona lasa izay tao amin'ny Richard III - izany no fotoana voalohany nilalao olon-dratsy ary nianatra zavatra betsaka momba izany - faly izy ireo!" - Denzel Washington
"Ny tetik'asa nofinofisiko farany dia ny zanako. Ny ankohonako." - Denzel Washington
“Aza manaiky lembenana mihitsy hoe iza ianao. Teraka miaraka amin'ny fahafaha-manao zava-dehibe ianao raha maniry izany. Ny fianarana miteny hoe tsia dia singa manan-danja amin'ny fidirana amin'izany fahalehibeazana izany. Ny safidinao no hamaritra anao; koa ataovy izay marina izy ireo.” - Denzel Washington
“Aza afangaro mihitsy ny hetsika sy ny fandrosoana. Satria afaka mihazakazaka amin'ny toerana ianao ary tsy mahazo na aiza na aiza. " - Denzel Washington
“Aza ampiana na oviana na oviana ny tsy mahay mankasitraka hitsangana amin'ny tongony. Toy ny milaza amin’ny amboadia fa ondry ianao.” - Denzel Washington
“Tsy misy na inona na inona amin'ny fiainana mendrika raha tsy mandray risika ianao. Mianjera mandroso. Ny fanandramana rehetra tsy nahomby dia dingana iray manakaiky ny fahombiazana. " - Denzel Washington
“Ny lehilahy antitra dia tsy maintsy ny antitra, ny trondro dia tsy maintsy ny trondro. Tsy maintsy ho iza ianao eto amin'ity tontolo ity, na inona na inona. " - Denzel Washington
"Eo amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana dia hisy foana ny fahafahana manampy olon-kafa hahomby." - Denzel Washington
"Ny fanandramana tsy nahomby dia dingana iray manakaiky ny fahombiazana." - Denzel Washington
"Ny zavatra tsara iray amin'ny filalaovana sarimihetsika dia ny fitsaboana tsara azy." - Denzel Washington
“Ataovy loha laharana amin’izay rehetra ataonao Andriamanitra. Izay rehetra ananako dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra, azoko izany. Fanomezana izany. Tsy nifikitra taminy foana aho, fa nifikitra tamiko kosa Izy.” - Denzel Washington
“Ka tsy fantatrao mihitsy hoe iza no kitihinao. Tsy fantatrao velively hoe ahoana na rahoviana no hisy fiantraikany, na ny maha-zava-dehibe ny ohatra asehonao amin’ny olon-kafa.” - Denzel Washington
“Fahombiazana? Tsy haiko ny dikan'io teny io. Faly aho. Saingy ny fahombiazana dia miverina amin'ny dikan'ny hoe fahombiazana eo imason'ny olona iray. Amiko ny fahombiazana dia fiadanana anaty. Andro tsara ho ahy izany.” - Denzel Washington
“Avy amin’Andriamanitra ny talenta. Raha efa nomena ianao dia omeo lanja, kolokoloy, asa ary ampitomboy. - Denzel Washington
“Ny vintana azonao, ny olona mifanena aminao, ny olona tianao, ny finoana anananao. Izany no hamaritra anao. - Denzel Washington
“Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nilaza aho fa vonona ny hiala. Tsy dia nahaliana ahy izany. Amin’izao fotoana izao aho no mitarika, dia vaovao indray izany rehetra izany. - Denzel Washington
“Ny hany manakana anao tsy hahatratra ny nofinofinao dia ireo tantara lazainao amin'ny tenanao fa tsy azonao atao. Aza miandry – manaova dieny izao. Tsy hanenenana na inona na inona.” - Denzel Washington
"Ny olona mahantra indrindra no olona mamy indrindra." - Denzel Washington
"Ny tanjon'ny ady dia ny manompo tanjona ara-politika fa ny tena toetran'ny ady dia ny manompo ny tenany." - Denzel Washington
“Ny fotoana tokony hanahiana momba ny sidina dia rehefa eny an-tany ianao. Rehefa miakatra eny amin'ny rivotra ianao dia tara loatra. Tsy misy dikany ny manahy momba izany. - Denzel Washington
“Misy karazany roa ny fanaintainana eto amin'izao tontolo izao. Ny fanaintainana maharary, ny fanaintainana miova. " - Denzel Washington
“Be dia be ny fifaliana azo amin'ny fisaintsainana ny zavatra niainanao rehefa miasa amin'ny nofinofinao ianao. Mianara mihomehy amin'ny tsy fahombiazanao, mitsiky amin'ny fandresenao ary aza matahotra ny mihomehy ny tenanao. " - Denzel Washington
"Tsy misy tsara na ratsy, afa-tsy amin'ny fampitahana." - Denzel Washington
“Mba hiarovana ny ondry dia tsy maintsy misambotra ny amboadia ianao. Ary mila amboadia vao misambotra amboadia, azonao ve?” - Denzel Washington
"Ny faniriana marina ao am-po ny zava-tsoa no porofo avy amin'Andriamanitra ho anareo, izay efa nalefanareo mialoha hanambara fa efa anareo izany." - Denzel Washington
"Matokia ny tenanao ary matokia ny safidinao." - Denzel Washington
"Manao izay tokony hatao izahay mba hahafahantsika manao izay tiantsika." - Denzel Washington
“Efa samy nahazo ny anjarantsika avokoa isika rehetra, ka izay no famariparitanako hoe betsaka. Fitahiana tokana no fanomezana rehetra eto amin'izao tontolo izao, ary raha voatahy ianao dia tokony hampita ny sasany amin'izany. Natao hanome ohatra tsara ianao. Andraikitsika izany.” - Denzel Washington
“Inona no ataonao fanampiny? Izay no zava-dehibe. Amin'izay fotoana izay ianao no miasa mafy – rehefa mihoatra ny zavatra andrasana aminao ianao. - Denzel Washington
“Ny nampianatra ahy dia ny famelan-keloka. Nampianatra ahy izy io fa rehefa maneho ny tenany amin'ny fomba iray ny olona dia mety misy tantara na olana na antony mahatonga azy ireo. Tsy ianao io. Izy ireo. Ary matetika, momba ny zavatra tsy voafehin'izy ireo tanteraka izany. " - Denzel Washington
"Rehefa nanao Tantaran'ny Miaramila aho dia mbola tanora sy maitso ary nihevitra fa fantatro ny zava-drehetra - fantatro izao fa fantatro ny zava-drehetra!" - Denzel Washington
“Fony aho mbola kely dia nihevitra aho fa nahita anjely. Nanana elatra izy io ary sahala amin'ny anabaviko. Nosokafako ny varavarana mba hidiran'ny hazavana ao amin'ilay efitrano, ary somary levona ilay izy. Nilaza ny reniko fa mety ho Anjelin'ny Mpiambina ahy io.” - Denzel Washington
“Rehefa manohitra sy tezitra amin'ny sarimihetsika ny olona, ​​​​dia lasa malaza be izany. Halan'izy ireo ny Passion of The Christ, niasa tsara ho an'ny box office. Koa andao hataontsika izany.” - Denzel Washington
“Rehefa manao ny tsara ianao, dia ho tsara! Ny fahatanterahana dia avy amin’ny fanompoana ny hafa, fa tsy amin’ny fiezahana hanompo ny tenanao fotsiny.” - Denzel Washington
“Rehefa manao ny tsara ianao, dia ho tsara! Ny fahatanterahana dia avy amin’ny fanompoana ny hafa, fa tsy amin’ny fiezahana hanompo ny tenanao fotsiny. Eo amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana dia hisy foana ny fahafahana manampy olon-kafa hahomby. Araraoty izany fahafahana izany, ary aoka ianao ho karazana olona mitondra fiovana eo amin’ny fiainan’ny hafa.” - Denzel Washington
"Rehefa tsy azonao ny zavatra iray, dia asianao marika ary manameloka azy." - Denzel Washington
"Amin'izay heveriko fa ny ankamaroan'ny asa tokony hatao dia ao ambadiky ny fakantsary fa tsy eo anoloana." - Denzel Washington
“Nahoana isika no manakimpy ny masontsika rehefa mivavaka, mitomany, manoroka, na manonofy? Satria ny zavatra tsara indrindra eo amin’ny fiainana dia tsy hita fa tsapan’ny fo.” - Denzel Washington
"Ny fanoratana dia fitaovam-piadiana ary mahery kokoa noho ny totohondry." - Denzel Washington
“Azonao atao ny mikapoka na managadra ahy na mamono ahy mihitsy aza, fa tsy ho araka izay tianao hahatongavana aho!” - Denzel Washington
"Tsy afaka manapaka ahy ianao satria tsy nanao ahy ianao." - Denzel Washington
“Tsy fantatrao hoe rahoviana ianao no jerena. Izany no iray amin'ireo zavatra hafahafa momba ny olo-malaza. Io no ampahany tiako indrindra amin’ny filalaovana, olo-malaza.” - Denzel Washington
“Tsy maintsy maka fotoana ianao rehefa mitranga izany. Tiako ny manao improvise sy ny ad lib. ” - Denzel Washington
“Tsy fantatrao mihitsy hoe ahoana no ho fiatraikanao amin’ny olona.” - Denzel Washington
“Nanao fanazaran-tena na inona na inona ela ianao, mahaiza tsara izany. Mandainga zato isan'andro ianao, toa ny marina izany. Samy mamadika ny olona rehetra.” - Denzel Washington
“Mivavaka ho an'ny orana ianao, mila miatrika ny fotaka koa ianao. Ampahany amin’izany izany.” - Denzel Washington